Dowladda Soomaaliya Oo hir-gelinaysa Bankiyo cusub oo ka shaqeyn doona howlaha ganacsiga – Radio Daljir
Luulyo 26, 2013 8:26 b 0
Muqdisho, July 26, 2013 – Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dhaqaalaha dalka wakhtigan soo gala uu yahay mid xadidan ilaha laga helo, iyadoo Dowladdu in badan difaac kaga jirta war-bixintii Qaramada Midoobey ee ay soo saareen guddiga dabagalka,.
Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye oo saxafiyiinta maanta oo jimce ah kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhaqaalaha wadanka uu yahay mid kooban, wuxuu sheegay in Bankiga dhexe ay ku soo dhacdo lacag ka timaada Dekeda iyo Garoonka Muqdisho.
Wuxuu beeniyey in Bankiga dhexe ee dalka ay ku soo dhacdo lacag ka timaada debbeda sida lacagaha gargaarka ah oo ah kuwa inta badan la isku eedeeyo, Mudane Hadliye oo arintaasi sharaxaad ka bixiyey ayaa sheegay haba yaraatee in aysan jirin lacag debeda uga timaada Bankiga dhexe.
Mudane Hadliye wuxuu sheegay in Bankiga dhexe ee dalka ay shirkad madax banaan dhigatay $17Milyan oo dollar kadibna ay si nadiif ah ula baxday, wuxuuna beeniyey in ay wax is daba marin dhacday intii uu isagu ahaa Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee dalka.
Docda kale maamulka Bankiga Soomaaliya waxay sheegeen maanta in ay haatan wadaan qorshe ay ku hir geliyaan saddex banki oo kale, kuwaasi oo ka shaqeyn doona howlaha ganacsiga dalka, balse si toos ah u hoos tegaya Bankiga dhexe ee dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Bankiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu markii labbaad maanta been abuur iyo wax aan jirin ku sheegay war-bixintii guddiga UN Monitoring ee arimaha Soomaaliya, war-bixintaasi oo ugu horeynba lagu sheegay in la lunsaday lacag taalay Bankiga dhexe ee Soomaaliya, guddigu waxay lacagta ku eedeeyeen gudoomiyaha Bankiga dhexe ee dalka mudane Cabdisalaan Hadliye in kastoo uu beeniyey.